Video Ahorow A Ɔma Nkorɔfo Akoma Enyi Gye
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bislama Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga (Malawi) Croatian Czech Danish Dutch English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Finnish French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Kabyle Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Krio Lingala Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Mfantse Mingrelian Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tankarana Tarascan Telugu Thai Tojolabal Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Valencian Vezo Wallisian Welsh Xhosa Zulu
“Ɔtse dɛ ma nna Jehovah ritsie awofo hɔn akoma mu nsɛm.” Iyi nye asɛm a egya bi a ɔwɔ Malaysia kãa faa video a wɔayɛ no tɔys ndzidzido a wɔato dzin Bɛyɛ Jehovah Ne Nyɛnko no ho.
Ofitsi aber a woyii dɛm video yi ne fã a odzi kan no edzi no, Jehovah Adasefo akɔ do dze Caleb nye n’ebusua no ayɛ video a wɔayɛ no tɔys no ndzidzido ndzidzido. Dɛm video ahorow yi a seseiara ibenya bi wɔ jw.org wɛbsaet yi do no, boa mbofra ma wonya abrabɔ nye Bible mu esuadze ahorow a no ho hia paa. Ibi nye siantsir a ɔnnsɛ dɛ wowia adze nye mbrɛ wobesi abɔ Nyankopɔn mpaa.
Wɔakyerɛ video ndzidzido yi no mu dza odzi kan no ase akɔ kasa dodow 131 mu mpo dadaw, na mbofra a wɔwɔ wiadze n’afã ahorow nyina rinya do mfaso.
Wɔabɔ Agye Do
Ɔbaatan bi a ɔwɔ mba beenum kyerɛɛw dɛ: “Dapɛn kor nye yi na yenyaa video a wɔato dzin Listen, Obey, and Be Blessed wɔ DVD do, na ofitsi dɛm aber no yɛahwɛ no bɛyɛ mpɛn 50.”
Millie yɛ basiaba a oedzi mfe 12 a ofi England, na ɔwɔ nuabanyin bi a oedzi mfe 15 a wɔfrɛ no Thomas a ɔwɔ adwen mu yarba bi a wɔdze woo no. Millie kyerɛɛw dɛ: “Thomas wɔ Caleb video ahorow no wɔ ne iPad do, ntsi obotum dze akyerɛ n’anyɛnkofo wɔ skuul. N’enyi gye ndwom no ho dodow, na ɔtow ma ɔyɛ ahomka ara ma ɔmaa onuabaa bi mpo sũi. Ɔsɛ w’enyiwa.”
Ava a ɔse oedzi mfe 8, abosoom 9, na nda 25 no kyerɛɛw dɛ: “Caleb na no nuabasia no nyim mbrɛ wosi kyerɛkyerɛ mbofra papaapa.”
Mikaylah kyerɛɛw dɛ: “Medzi mfe esia. Meda hom ase papaapa wɔ DVD a n’asɛntsir se Listen, Obey, and Be Blessed no ho. Ɔkyerɛ me dɛ ɔsɛ dɛ mitsie m’awofo osiandɛ ɔno ma Jehovah n’enyi gye.”
Obi a ɔnnyɛ Jehovah Dasefo naaso ɔno so yɛ video a wɔayɛ no tɔys no bi no hwɛɛ video a wɔato dzin Mma Nnwia Adze no. Ɔkãa n’akoma ankasa, nkanka aber a obohun dɛ nyimpakuw kakraabi pɛr na wɔbɔɔ mu yɛe no. Ɔkãa dɛ: “Minyim nkorɔfo a wɔyɛ edwuma wɔ ndwumakuw akɛse na nkakraba nyina mu a wɔyɛ video a wɔayɛ no tɔys no ho edwuma, na ɔtɔfabi a modwen ho mpo dɛ, hɔ edwumayɛ bɛyɛ dɛn. Naaso ne nyina ekyir no, mbɔdzen a wɔbɔ nye edwuma a wɔyɛ no nyinara kowie biribi a oyi paserew kakraabi wɔ mber tsiabaa bi mu, noara nye no. Hom video a wɔayɛ no tɔys no sesã mbofra asetsena, ɔkyerɛ ɔkyerɛ pa, na ɔboa hɔn ma wosisi gyinae papa. Hom reyɛ biribi a mfaso wɔ do, biribi a ɔboa nyimpa.”
Awofo a wɔwɔ wiadze mbea nyina nye dɛm nyimpa yi yɛ adwen paa. Maame bi kyerɛɛw dɛ: “Nna me babanyin bi a wɔfrɛ no Quinn a oedzi mfe ebiasa rohwɛ video a wɔato no dzin Gaining Jehovah’s Friendship no. Ogu do rotow ndwom no ara, nna ɔmaa ne tsir do hwɛɛ m’enyim, na ɔdze ne nsa ketseketse no too n’akoko do na ɔkãa dɛ: ‘Maa, sɛ mohwɛ video yi a ɔma m’akoma enyi gye.’ ”